सरकार डा.केसीको मृत्यु कुरेर बसेकै हो त ? - Setimadi Dainik
सरकार डा.केसीको मृत्यु कुरेर बसेकै हो त ?
दक्षिणी अफ्रिकी फोटो ग्राफर केविन कार्टर द्धारा क्यामेरा कैद गरिएको यो दृश्य यतिबेला डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा ठ्याक्कै मेल खान पुगेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दे त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा सत्याग्रहमा बसिराखेका डा.केसी यतिखेर तस्बिरमा कैद भएका सुडानी बालक जस्तै मृत्यु कुरेर बसिराखेका छन् भने गिद्धरुपी सरकार डा. केसी कतिबेला मर्लान् र आहारा बनाउँला भनि प्रतिक्षा गरिाखेको अवस्था छ ।
यदि सरकारको यस किसिमको सोच नहुँदो हो त १५ औं चरण अन्र्तगत २७ औं दिनसम्म डा. केसी सत्याग्रह बसिरहँदा अवश्य पनि सरकारको ध्यान पुग्ने थियो ।तर डा.केसीको सत्याग्रहमा सरकारको एकरति पनि ध्यान पुगिराखेको अवस्था छैन । बरु सरकारले डा. केसीको सत्याग्रहलाई दमनको नीति अपनाई रहेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा डा. केसीले १५ औं चरणकै सत्याग्रह अन्र्तगत जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेको सत्याग्रहलाई लिन सकिन्छ । डा.केसीले १५ औं चरणको सत्याग्रह सुरु गर्नु अगाडि नै सरकारले उनी माथि दमनको रणनीति अपनाएको थियो ।जसले गर्दा डा.केसी जुम्ला स्थित कभर्ड हलमा बसेर सत्याग्रह गर्न बाध्य भएका थिए । तर पछि स्वास्थ्य स्थिती खस्कदै जाँदा डा. केसीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्थान्तरण गर्नुपरयो । तर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहँदा डा. केसी सहज ढंगले सत्याग्रहमा बस्न पाएनन् । यहाँसम्मकि अन्तिम दिनमा जिउँदै प्रहरीलाई मृत घोषणा गरेर अपहरण शैलीमा डा. केसीलाई राजधानी पुरयाउने काम सरकारले गरयो ।त्यसक्रममा सरकारले प्रतिष्ठान भित्र प्रहरी परिचालन गरी व्यापक दमन गरेको थियो । जुन घटना स्वास्थ्य क्षेत्रको इतिहासमा एउटा कालो धब्बा बन्न पुगेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र होइन डा. केसीको सर्मथनमा राजधानीमा निस्किएका शान्तिपूर्ण जुलुसहरुमा समेत सरकारले व्यापक हस्तक्षेप गरेको छ । जुन हस्तक्षेपका कारण डा. केसीका दर्जनौं सर्मथकहरु घाइते भएको अवस्था छ ।
यद्यपी गिद्धरुपी सरकारले डा. केसी संग यो बीचमा वार्ताको पहल भने गरिरहेको छ । मंगलबार पहिलो चरणको वार्ता पनि अगाडि बढेको थियो । पहिलो चरणको उक्त वार्ताले आम सर्वसाधारणमा एक किसिमको आशा जगाएको थियो । तर बुधबार भएको वार्तामा डा. केसीले राखेको मागका विषयमा सरकारले असहमति जनाएपछि फेरी वार्ता रोकिन पुगेको छ । डा.केसीको समर्थकहरु आन्दोलित हुन पुगेका छ्न ।यहिबीचमा बिहिबार डा.केसीका समर्थनमा उत्रिएका चिकित्सकहरु माथि सरकार हस्तक्षेप गरि चिकित्सकहरुलाई प्रकाउ गरेको अवस्था छ ।
यि पछिल्ला घटनाक्रमले के स्पष्ट हुन्छ भने सरकार डा. केसीको मृत्यु कुरेर बसिराखेको छ ।यदि त्यसो नहुँदो त डा.केसीको मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार सम्वेनशील हुने थियो । हेरौ, गिद्धरुपी सरकार अझै कतिञ्जेल डा.केसीको मृत्यु कुरेर बसिराख्छ ?त्यो त समयले नै बताउँने छ ।
आमाले गिटी कुटर विद्यालय पठाएकी सुस्मिता स्वर्ण महोत्सवमा बोल्दा बोल्दै भक्कानिन्
१८ हजार भत्ताको विषयमा देवघाट गाउँपालिका मौन
छतबाट लडेर बालकको ज्यान जानुमा आखिर दोषी को अभिभावक , ठकुरी समाज र नगरपालिका ?
सरकार भष्ट्रचारको दलदलमा फसेको छ —वरिष्ठ नेता पौडेल
देवघाट गाउँपालिका अध्यक्षको भ्रमण भत्ता १८ हजार ! प्राविधिक त्रुटी कि यथार्थ ?